မုန်တိုင်းကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အိမ်ခြေ ၁၉၀ ကျော်အပါအ၀င် စာသင်ကျောင်း များနှင့် ဘုန်း?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ မေ ၃၀-ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သော မုန်တိုင်း အရှိန်ကြောင့် အိမ်ခြေ ၁၉၀ ကျော်အပါ အ၀င် စာသင်ကျောင်း များ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲ မှုဦးစီး ဌာန ပြည် နယ်ဦးစီးမှူးရုံးမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးရဲမင်းဦးက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ မေလ ၃၀ ရက်က ပြောသည်။
မေလ ၂၉ ရက် ည မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၃း၀၀ နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက် များ အရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့ပိုင်း တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသာ အားကောင်းသော မုန်တိုင်း ငယ် (Deep Depression) သည် မြန် မာနိုင်ငံ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကို အမ်းမြို့အနီး မှ ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက် ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ဦးရဲမင်းဦးက “ညကတိုက်တဲ့ မုန်တိုင်းကြောင့် မြို့နယ် ရှစ်မြို့နယ်မှာ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးတာတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကနဦးသတင်းအရကတော့ ဓာတ်မီးတိုင်တွေ လဲ တာရှိတယ်။ ဆရာ၊ ဆရာမအဆောင်တွေ ပျက်စီးတာတွေရှိတယ်။ စုစုပေါင်း မြို့နယ် ရှစ်မြို့နယ်ကို ခြုံပြောရ ရင် နေအိမ်ချည်းပဲ ပျက်စီးတဲ့အိမ်က ၁၉၈ အိမ်၊ စာသင်ကျောင်း ၁၇ ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း ၁၀ ကျောင်း၊ မြေပုံမှာ စက်လှေ တစ်စင်း ၊ တောင်ကုတ်တွင် တံတားငယ်တစ်စင်း ပျက်စီး၊ သေဆုံးသူ သုံးဦးရှိခဲ့ ပါတယ် ” ဟုပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည့် မြို့နယ်များ မှာ ကျောက် ဖြူ၊ ရမ်းဗြဲ၊ သံတွဲ၊ မာန်အောင်၊ မြေပုံ၊ ငပလီ၊ တောင် ကုတ်မြို့နယ်များဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သံတွဲမြို့ဒေသခံတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးမှတ်ကြီးက ” သံတွဲမှာ တော့ ညက လေတော်တော်တိုက်ပါတယ်။ သစ်ပင်လဲတာ မျိုးတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ဆိုးဆိုးရွားရွားကြီးတော့ မဖြစ်ပါဘူး။ ဒီနေ့နံနက်ဆိုရင် နေတောင်သာနေပါတယ် ” ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေး သတင်းစာသို့ မေ ၃၀ ရက်က ပြောသည်။
အဆိုပါ မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့် လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊ မိုးသည်း ထန်စွာရွာ သွန်းခြင်းကြောင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အများစုတွင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး တောင်ကြီးမြို့ ဒေသခံတစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ်ချယ်ရီကျော်က “တောင်ကြီးမှာတော့ ၂၉ရက်နေ့ ညကတစ်ည လုံး လေတိုက် တာ တော်တော်ပြင်း တယ်။ သိရသလောက်ကတော့ သစ်ပင်တွေ ကျိုးတယ်။ ဆိုင်းဘုတ်တွေပြိုကျတယ်။ တခြားကြီးကြီးမား မားဖြစ် တာတော့ မကြားမိဘူး။ ဒီနေ့နံနက်တော့ မိုးတော် တော်ရွာတယ်” ဟု ပြောသည်။
မုံရွာအကျဉ်းထောင်ဝင်းအတွင်း လျှပ်စစ်မီးအပူလွန်ကဲရာမှ ၀န်ထမ်းလိုင်း ခန်းများ မီးလောင်မြှု??
လုပ်ငန်းရှင်အချို့ အခွန်ရှောင်မှုများကြောင့် ပို့ကုန်တင်ပို့မှုအပေါ် ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန် ၂ ရာ